मिनी-ओवन - स्वस्थ र स्वादिष्ट खाना खाना पकाउने मा सबै भन्दा राम्रो सहायक!
मिनी-ओवन सुविधाहरू :. ताप, defrosting, संवहन, ग्रिल, टोष्टर, आदि को एक शस्त्रागार संग एउटा सानो, संकुचित ओवन रूपमा विशेषता छ निस्सन्देह, यो प्रविधी मात्र भान्सा मा एक मनपर्ने र बेबदल सहायक बन्न छैन, तर पनि यसको स्टाइलिश, मूल कुनै पनि भित्री को उपस्थिति पूरक गर्न । सामान्यतया, एक कम्प्याक्ट एकाइ निर्मित कार्यहरु को मात्रा मा सिधै निर्भर छ। आज, स्टोर मिनी-भट्टामा एक विस्तृत विविधता पूरा गर्न सक्छन्। कसरी यो हराएको र आफ्नो मोडेल पत्ता लगाउन गर्न?
जब घर उपकरण को यस प्रकार छनौट, एक मिनी-ओवन जस्तै, यो आवश्यक केही नियमहरू पालन गर्न छ। पहिलो नियम खरीद उद्देश्य निर्धारण गर्न छ। उदाहरणका लागि, धेरै मान्छे देश मा मौसमी प्रयोगको लागि मिनी-ओवन हुन्छन्। यस मामला मा, एक हट प्लेट र एक ओवन एक मोडेल चयन गर्नुहोस्। को घरेलु जोडी पठाइएको छ भने, लगभग 10-15 लिटर लागि ओवन को आकार संग उत्पादनहरु पर्याप्त छ। एक व्यस्त परिवार वा साथीहरू र आफन्तहरूले एक ठूलो संख्या को लागि, क्रमशः, एक मात्रा मोडेल चाहिन्छ। मा मिनी-ओवन महत्वपूर्ण घर स्थायी प्रयोगको लागि - ओवन, र मात्रा यसलाई फेरि मान्छे को अनुमानित निर्भर हुनेछ। विस्थापन मानक ओवन औसत बारेमा 50-60 लिटर, मिनी ओवन, यो देखि 8-9 35-55 गर्न लिटर को दायरामा फरक हुन्छ।
दोस्रो नियम - एक उपयुक्त उपकरण चयन बिजुली ओवन। माथि एक, दोस्रो - - तल लगभग सबै आधुनिक मोडेल दुई ताप तत्व समावेश गर्दछ। / बन्द गर्नुहोस् र दुवै ताप तत्व को शक्ति अलग नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, र जसबाट ऊर्जा बचत गर्नुहोस्। यसरी, उदाहरणका लागि, साथ ताप केक को मामला मा लाभप्रद छ, जब 100% आवश्यक propekaniya दुई पक्ष बाट तातो हावा उड्ने।
अर्को, ध्यान गर्नुपर्छ - यो ओवन को आन्तरिक कोटिंग छ। यो उत्पादन, मिनी-ओवन को प्राविधिक विनिर्देशों, उपभोक्ता समीक्षा पनि पुष्टि छन्। स्थायित्व, सञ्चालनको सजिलो सीधा आन्तरिक कोटिंग गुणस्तर निर्भर। वर्तमानमा, मिनी-भट्टामा को विभिन्न मोडेल लागि निर्देशनहरू चिन्ह «Durastone» पाउन सकिन्छ। कोटिंग विभिन्न यांत्रिक हर्जाना (खरोंच, आदि) उच्च तापमान र आक्रामक क्लीनर मध्यम गर्न प्रतिरोधी छ कि यो प्रत्याभूति संकेत।
यो हुनत यो विकल्प प्रत्येक प्रयोगकर्ता को व्यक्तिगत प्राथमिकताहरू मा निर्भर गर्दछ, प्रौद्योगिकी को कार्यक्षमता ध्यान महत्त्वपूर्ण छ। घडी, «बूस्टर» (वृद्धि ऊर्जा खपत धेरै छिटो खाना पकाउन गर्ने क्षमता), संवहन वा वेंटिलेशन र defrosting: वहाँ चार मुख्य कार्यहरु प्रत्येक एक मिनी-ओवन छ छन्। उत्तरार्द्ध सुविधा एक माइक्रोवेव ओवन खरिद गर्न आवश्यकता eliminates। मिनी-भट्टामा विभिन्न मोडेल यस्तो "ग्रिल", "मुरब्बा", "दही" सुविधाहरू संग सुसज्जित गर्न सकिन्छ। तर यो बारेमा परिवार यसको लागि भुक्तानी गर्नु अघि यो समारोह मा आवश्यक कसरी राम्ररी सोच्न राम्रो छ।
मिनी-ओवन DELONGHI, डेल्टा, Ariete, Scarlett, Redber र अरूलाई: आज तपाईं विभिन्न निर्माताहरु मोडेल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। के तपाईं साँच्चै, किन्न पकाउने प्रक्रिया facilitated पहिलो एक अनुभवी पसल सहायक संग परामर्श गर्न चाहनुहुन्छ भने, उपभोक्ता समीक्षा पढ्नुहोस्, र त्यसपछि अधिग्रहण एक आनन्द हुनेछ!
कटलरी ट्रे - सान्त्वना र भान्सा मा आदेश
कसरी रजाई चयन गर्न
जूट डोरी। सौंदर्य र कार्यक्षमता
के Greta बोर्डहरू र आफ्नो फाइदा र बेफाइदा छन्
बच्चाहरु को लागि Trampoline - आमाबाबुले मदत गर्न!
तस्वीर संग तकिया - मूल सहायक
रगत समूह को प्रकृति कसरी निर्धारण
Peterhof मा पार्क "Sergievka": समीक्षा प्राप्त गर्न कसरी एक विवरण। रूसी संघ को सांस्कृतिक सम्पदा वस्तु
तर्क के छ: परिभाषा र नियमहरू
बच्चा बाल गिरावट छ: सम्भावित कारणहरू, उपचार र सिफारिसहरू
Supplex - कपडा मात्र merits भइरहेको
जादुई क्षमता र आफ्नो विकास
"Flibustu" प्राप्त कसरी गर्न: सुझाव, निर्देशन
बच्चाहरु को सफल विकास को लागि सबै भन्दा राम्रो अभ्यासहरू